ဘာလို႔လဲ - Birmanca - İngilizce Çeviri ve Örnekler
Şunu aradınız:: ဘာလို႔လဲ (Birmanca - İngilizce)
ကျွန်တော်​တို့​အနေ​နဲ့ ကောင်းကင်​ကား​တွေ​ဆောက်​ဖို့​ထက် ဆင်ခြေဖုံး​ဆင်းရဲသား​ရပ်​ကွက်​တွေ​ကို ဘယ်​လို​သန့်​ရှင်း​ရ​မ​လဲ၊
ဒါပေမဲ့ လွတ်လပ်​ရေး​နေ့​အခမ်းအနား​မှာ ဘယ်​လိုက်​ဘေး​ရီး​ယား​ပြည်​သူ​တွေ​က သူ​တို့​အလံ​ကို​မနှစ်​မြို့​ကြောင်း​ပြတာ တွေ့​ဖူး​လို့​လဲ?
who do you think you are to do that? suchadisgrace to the country.
ဒါ​မျိုး​လုပ်​ဖို့ ခင်ဗျား​တို့​ကိုယ် ခင်ဗျား ဘယ်​သူ​တွေ​လို့ ထင်​နေ​တာ​လဲ။
divided with two themes, with two logos and even with two different flags.
i see retards who have parked their motorbikes somewhere.
မင်း​တို့​တွေ​ကတော့​မေး​ခဲ့​ပါ​တယ် "ဘယ်​က​နေ ဘယ်​ကို​သွား​မှာ​လဲ" ဆို​ပြီး​တော့။
some of you asked me- "from where & where will you go?"
သူ​တို့​အလံ​ကို ပြောင်း​မယ်​ဆို နိုင်​ငံတော်​သီချင်း​ကို​ရော ဘာ​လို့​မ​ပြောင်း​တာ​လဲ။
the first picture shows pakatan rakyat supporters unfurlingadifferent flag which (by the looks of it) they want to replace our national flag.
အမျိုးသား​ပညာ​ရေး​က ဘာ​ကြောင့် ကြောက်​ဖို့​ကောင်း​ရသ​လဲ
hong kong: why is "national education" scary? · global voices
ငါ၏လူတို့သည် ငါ့ကိုမေ့လျော့၍၊ အချည်းနှီး သော အရာရှေ့မှာ နံ့သာပေါင်းကို မီးရှို့ကြပြီ။ ရှေးကာလ မှစ၍ လိုက်ဘူးသော လမ်းတို့၌လဲ တတ်သောကြောင့်၊ အခြားသောလမ်း၊ မြေမဖို့သောလမ်းသို့ လိုက်ကြပြီ တကား။
တဖန် နက်ဖြန်နံနက် စောစောထကြသောအခါ၊ ဒါဂုန်သည် ထာဝရဘုရား၏ သေတ္တာတော်ရှေ့၌ မြေပေါ်မှာ လဲ၍ ပြပ်ဝပ်လျက်၊ ခေါင်းနှင့် လက်ဝါးနှစ်ဘက် ပြတ်၍ တံခါးခုံပေါ်မှာတင်လျက်၊ ဒါဂုန်၌ ကိုယ်တိတိရှိသည်ကို တွေ့ကြ၏။
တဖန်အရှင်ထာဝရဘုရား၏ အမိန့်တော်ကို ဆင့်ဆိုရမည်မှာ၊ ငါအသက်ရှင်သည်အတိုင်း၊ ပျက်စီး သော အရပ်၌နေသော သူတို့သည် ထားဖြင့် လဲ၍ သေရ ကြလိမ့်မည်။ လွင်ပြင်၌ရှိသော သူတို့ကို ငါသည်သားရဲ ၌အပ်၍ ကိုက်စားစေမည်။ ရဲတိုက်ဥမင်၌ရှိသော သူတို့ သည် ကာလနာနှင့် သေရကြလိမ့်မည်။
ထားဘေးသည် အဲဂုတ္တုပြည်သို့ ရောက်သဖြင့်၊ သူရဲတို့သည် လဲ၍သေကြသောအခါ၊ အဲသယောပိပြည် သည် ပူပန်လိမ့်မည်။ အလုံးအရင်းကို ပယ်ရှား၍ မူလ အမြစ်ကို ဖြိုဖျက်ကြလိမ့်မည်။
ထိုနေ့တွင် လဲ၍ သေသော ဗင်္ယာမိန် ထားစွဲသူရဲတို့ အရေအတွက်ကား၊ နှစ်သောင်းငါးထောင်တည်း။
ထိုမိန်းမသည် ပေတရု၏ ခြေရင်း၌ လဲ၍ သေလေ၏။ လုလင်တို့ သည်လည်းဝင်၍ ထိုမိန်းမသေ သည်ကိုတွေ့လျှင်၊ ဆောင်သွား၍သူ၏ ခင်ပွန်းအနားမှာ သင်္ဂြိုဟ်ကြ၏။
ထိုသို့သူရဲတို့သည် ခါလဒဲပြည်တွင်၊ လမ်းမတို့၌ လဲ၍အထိုးခံရကြလိမ့်မည်။
ထိုသူသည် မတရားသောအမှုအတွက်ဖြင့်ရသောအခနှင့် မြေတကွက်ကိုဝယ်ပြီးမှ၊ မှောက်လျက်ကျ လဲ၍ ဝမ်းကွဲသဖြင့် အအူများပေါက်လေပြီ။
ထိုအခါ ဗင်္ယာမိန်သူရဲ တသောင်းရှစ်ထောင်တို့သည် လဲ၍ သေကြ၏။
ထိုအခါယာကုပ်သည် အိမ်သူအိမ်သားများနှင့်၊ မိမိ၌ရှိသောသူအပေါင်းတို့ကို ခေါ်၍၊ သင်တို့တွင် ပါသော၊ တပါးအမျိုးသားတို့၏ ဘုရားတို့ကို ပယ်ပစ် ကြလော့။ အဝတ်ကို လဲ၍ သန့်ရှင်းခြင်း ရှိစေကြလော့။
ဗာဗုလုန်မြို့ကြောင့် ဣသရေလအမျိုးသူရဲတို့ သည် လဲ၍သေသကဲ့သို့၊ ဗာဗုလုန်မြို့ထဲမှာ ပြည်သား သူရဲအပေါင်းတို့သည် လဲ၍သေကြလိမ့်မည်။
福岛核事故爆发之后 (Çince (Modern)>Vietnamca)contabilista (Portekizce>İngilizce)天气晴朗 (Çince (Modern)>Gürcüce)i have outgrown (İngilizce>Tagalogca)échographie (Fransızca>Yunanca)dátum dodania (Slovakça>Macarca)shart (İsveççe>İngilizce)acido urico (İspanyolca>Almanca)सेक्सी वीडियो नंगा (Hintçe>İngilizce)invieremo (İtalyanca>İspanyolca)for the meantime (İngilizce>Tagalogca)ek saal baad best friend se mili (İngilizce>Hintçe)οσχεοκήλη (Yunanca>İngilizce)enjoy your life open (İngilizce>Hintçe)nous avons sensibilisé (Fransızca>İngilizce)हिंदी सेक्सी video hb(Hintçe>İngilizce)हिंदी सेक्सी video hot biup (Hintçe>İngilizce)הדוגמאות (İbranice>Macarca)chuhe ne kaat liya (Hintçe>İngilizce)scheduled visit (İngilizce>İtalyanca)bakalářský (Çekçe>Lehçe)quelle belle photo (Fransızca>İngilizce)foreskin (İngilizce>İspanyolca)shepherd (İspanyolca>İngilizce)bryggeriernas (İsveççe>İngilizce)